Hividy vovoka testosterone enanthate amin'ny Bulk | AASraw
/Blog/testosterone Enanthate/Mividiana vovoka Testosterone Enanthate amin'ny Bulk
Posted on 01 / 27 / 2018 by Dr. Patrick Young nanoratra tao testosterone Enanthate. Manana izany 12 Comments.
Inona ny Testosterone Enanthate?
testosterone Enanthate dia iray amin'ireo fampiasana testosterone fampiasa matetika amin'ny fitsaboana testosterone ambany. Izy io koa dia malaza be amin'ny fihodinan'ny fampivoarana. Io no iray amin'ny steroids anabolic mora indrindra amin'ny tsenam-barotra, be dia be, mora foana ny ankamaroan'ny olon-dehibe ary ny fitaterana azy dia eny amin'ny tafo.
Testosterone Enanthate dia steroide anabolic izay tonga lafatra amin'ny fampiasana rehetra. Izany no steroid anabolic tanteraka amin'ny voalohany ny steroid mpampiasa ary dia ho tanteraka ihany koa ho an'ny olona manana fotoana be dia be ao amin'ny saddle. Hiteraka vokatra hafa izy io saingy ho hitantsika koa fa mora ny mifehy azy ireo. Raha mahagaga izany dia tsy tokony hisy izany. Na izany na tsy izany, na ny synthetic dia testosterone tsotra fotsiny, hormonina ny vatan'olombelona dia tsy zatra tsara fotsiny fa iray izay tena ilaina amin'ny fahasalamantsika sy ny fiantrana.
Inona ny Testosterone enanthate powder?
Anarana: Testosterone Enanthate
Loko: Vovon-tsolotsaina kristaly
Cycles and Uses Testosterone Enanthate
Ny cycles de testosterone enanthate dia matetika ny fitomboan-karena na ny masomboly mahazo ny natiora, na dia azo ampiasaina amin'ny fomba manokana amin'ny fihenan-tsakafo na ny fahavoazana very. Ho an'ny fanatanjahan-tena na fampiroboroboana, ny Testosterone Enanthate dia matetika ampiasaina amin'ny dosage avo kokoa (matetika ny kely indrindra amin'ny 500mg isan-kerinandro), ary satria steroide anabolic miaraka amin'ny ezitera lava napetraka eo aminy, dia haneho ny antsasaky ny fiainana lava kokoa 7 - 10 andro, ary noho izany dia mihazakazaka mandritra ny fe-potoana amin'ny 10 - 12 herinandro na mihoatra ny fe-potoana fitsaboana testosterone.
Amin'ny teboka roa sy ny fihodinana, ny Testosterone Enanthate dia matetika mifototra amin'ny endrika hafa amin'ny endrika izay hanamora ny tanjon'ilay mpampiasa (fipoahana, fanasarotana betsaka, na fatiantoka matavy). Ohatra, ny famantaran'ny Testosterone Enanthate ho an'ny tanjona dia ny fampiasana ny Deca-Durabolin (Nandrolone Decanoate) sy / na Dianabol (Methandrostenolone), izay matetika i Dianabol dia mihazakazaka mandritra ny herinandro voalohany 6 ho toy ny fanangonana fanombohana.
Ao amin'ny trangan-javatra fanoherana ny testosterone enanthate na ny fihenan-tsakafo, ny Testosterone Enanthate dia matetika mihazakazaka amin'ny PHT (Testosterone Replacement Therapy Therapie) ambany amin'ny 100mg isan-kerinandro raha toa ka ilaina kokoa ny fanafody hafa kokoa noho ny fihenan-tsakafo sy ny fatiantoka mandritra ny vanim-potoana . Ny fampiasana ny Testosterone Enanthate amin'ity dosage ity dia ny fikojakojana ny fomba fiasa ara-batana fa tsy ny fanamafisana ny fandrosoana sy ny fampivoarana.
The dosage of tsolika Testosterone Enanthate:
Ho an'ny testosterone ambany, ny taham-pahazavana Testosterone Enanthate dia hianjera amin'ny 100-200mg isaky ny 7-10 andro iraisam-pireneny. Na izany aza, ny dokotera sasany dia hanasaraka ny fitsaboana manontolo sy hitantana izany isaky ny dimy andro. Tsy dia fahita firy any Etazonia ny dokotera sasany milaza ny doses amin'ny 200-400mg isaky ny herinandro 2-3 ary indraindray isaky ny herinandro 4. Tena tsy fahombiazana izany fa fampiharana sasany. Tsy maharitra mandritra ny fotoana maharitra ny fitsaboana. Ny ankamaroan'ny olona mila fitsaboana testosterone ambany dia mila izany ho an'ny fiainana. Mety hahasosotra izany saingy manontania tena fanontaniana manan-danja; Moa ve ianao mijaly amin'ny testosterone ambany na ny fitsaboana azy?
Ao amin'ny sehatra fampivoarana ny fampiroboroboana dia ampidirina amin'ny 200-500mg isan-kerinandro ny dosona ampiharina amin'ny Testosterone Enanthate. Ny 200-250mg isan-kerinandro dia mahazatra raha ampiasaina fotsiny ny hormone mba hiadiana amin'ny fanafody testosterone voajanahary vokatry ny fampiasana steroide anabolic hafa. Ho an'ny vokatra anabolika marina, ny ankamaroan'ny lehilahy dia hahita 400-500mg isan-kerinandro mba hahomby sy ho mora ny mifehy. Ny dosia toy izany dia azo zaraina ho dingana mitovy roa isan-kerinandro mandritra ny dingana iray isan-kerinandro. Doses dia afaka avoaka noho ny 500mg isan-kerinandro; Na izany aza, maro ireo lehilahy no hahita ny laharana 500mg ho azy ireo izay ilainy. Raha maro kokoa no tadiavina, maro ireo lehilahy no hahita 600-1,000mg isan-kerinandro azo omena sy hifehy saingy ny doses izay manatona ny marika 1,000mg dia hampitombo be ny mety ho vokany ratsy. Ohatrinona ny testosterone azon'ny olona iray ateraky ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso dia miovaova amin'ny lehilahy iray mankany amin'ny manaraka. Na izany aza, ny ankamaroan'ny lehilahy dia hahita doses mihoatra ny 1,000mg isan-kerinandro, fa miantoka ny fiantraikany amin'ny ampahany hafa.
Na inona na inona tanjon'io fampiasanao io, ny Testosterone Enanthate dia mitazona tsara amin'ny steroids rehetra anabolic. Tsy misy antony tokony hakana azy io amin'ny testosterone hafa. Tsy misy dikany izany amin'ny ankamaroan'ny tranga. Mifidiana fomba amam-pitsaboana hafa izay mifanaraka amin'ny tanjona tianao hampiasaina amin'ny fomba mahomby.
Testosterone Enanthate dia steroide anabolic tena tsotra, nefa iray ihany koa ny steroids lehibe indrindra amin'ny anabolika amin'ny fotoana rehetra. Tena mahery vaika izy ary miteraka fahalalahana avo lenta eo amin'ny ankamaroan'ny olon-dehibe. Ho fitaovana fitsaboana, ny fampiasana Testosterone Enanthate dia afaka manova tanteraka ny fiainanao. Mihoatra lavitra noho izay azo atao ny lehilahy iray efa zokinjokiny hahatsiaro ho mbola ao anatin'ny roapolo taona indray. Tsy vitan'ny hoe hiverenany ny zatony sy ny zotom-pony ho an'ny fiainana, ho salama tsara izy.
Ao anatin'ny fahaiza-manaon'ny mpampiasa, raha maro no haka ny steroids hafa anabolic amin'ny Testosterone Enanthate dia azo ampiasaina irery. Izany dia fototra amoron-kevitra anabolic steroid izay afaka mampivelatra ny fiovan'ny radika amin'ny vatan'olombelona rehetra. Na dia raisina ambony aza ny diplaïsyolojika mba hahazoana fiovàna marina sy mendri-piderana, dia mijanona ho avo dia avo ny fatran-tsasatra ho an'ny vokadratsiny. Zava-dehibe ihany koa, raha toa ka mahomby tokoa ny vidin'ity steroid ity dia mihoatra lavitra noho ny vidiny anomezana azy bebe kokoa noho ny efa ananany. Na inona na inona zava-niainanao, tsy afaka ny tsy mety ianao amin'ny Testosterone Enanthate.
Aiza no buy Testosterone Enanthate powder online?
Azonao atao ny mahita loharanom-panafody Trenbolone Acetate ao anaty aterineto, nefa sarotra ny mividy ny vovony Genuine Trenbolone Acetate online. Maro ny loharanom-pivarotana vokatra hosoka eny an-tsena. Ka rehefa mividy vovoka Trenbolone Acetate ao anaty aterineto ianao, mila mifidy ianao loharano mahavariana.
tombony ny buy Testosterone Enanthate powder avy any AASraw:
1. Ny steroïde tsara indrindra raha oharina amin'ny vidin'ny orinasa ambany
Miantoka ny fahamendrehana avo indrindra amin'ny fanodinana rehetra> 98% isika, ary satria isika no mpanamboatra tsy mpivarotra, ny entana rehetra dia mivarotra mivantana amin'ny vidiny mora indrindra.
2. Fiterahana haingana sy tsy azo antoka amin'ny fananganana steroid stereo
1) Azo atao ny mandefa ny parcel amin'ny ora 24 ora aorian'ny fandoavam-bola, dia manome ny laharana manaraka.
2) Mpanjifa efa za-draharaha no manome antoka fa azo antoka sy malina ny entana rehetra vita amin'ny steroid. Fomba fitaterana samihafa, ary mifidy ny tsara indrindra araka ny adiresy tsirairay.
3) Ny taha ambony avo lenta amin'ny fiantohana azo antoka dia mihoatra ny 95%.
4) Fotoam-pamindram-po ho an'ny steroids vovoka: 3-5 andro fiasana ho any Etazonia, ary andro 4-6 ho an'ny firenena EU.
3. Manana mpanjifa manerana izao tontolo izao izahay
1) Ny serivisy matihanina sy ny traikefa ananan'olona dia mahatonga ny mpanjifa hahatsiaro ho maivamaivana, ny tahiry ampy amin'ny karazana fitaovana steroid rehetra sy ny fivoahana haingana dia mahafa-po ny faniriany.
2) Horaisina ny fanehoan-kevitry ny mpampiasa, ny soso-kevitrao dia hanampy antsika hanatsara ny serivisinay, ary andraikitsika ny mamaly ny fangatahan'ireo mpanjifa.
3) AASraw dia iray amin'ireo mpamatsy azo antoka indrindra amin'ny fanondranana steroid stereo amin'ny tsara indrindra ny entana ilaina, safidy & haingam-pandeha amin'ny serivisy tsara.
Valiny valinteny valin'ny 12
Ronald J Rapacciuolo10 / 23 / 2018 amin'ny 12: 33 pm
Te hividy 100 gramin'ny fitsapana E sy 100 gram of Deca dia mila mahafantatra ny vidiny sy ny fampahalalana momba ny handefasana vola gram. Na ny volam-bola.
John Kramer10 / 22 / 2018 amin'ny 9: 11 pm
Miankina amin'ny fividianana Test E, Test C sy ny sasany Deca. Henoko ianao ry zalahy dia azo antoka sy ara-dalàna. Avereno azafady amiko.
Jeremy butler10 / 22 / 2018 amin'ny 4: 29 pm
Te hividy vovo 100 volo. Vaovao vao vita. Araka ny nambaran'ny mpiasa iray tamiko momba izany.
Dave09 / 14 / 2018 amin'ny 7: 36 pm
Ohatrinona ny fanandramana 500mg E ary ahoana no hividianako
Dr. Patrick Young09 / 02 / 2018 amin'ny 8: 59 pm
OK, hifandray aminareo haingana araka izay tratra.
Christopher09 / 01 / 2018 amin'ny 5: 37 pm
Te hividy 100 gramin'ny fitsapana E sy 100 gram of Deca mila mahafantatra ny vidiny sy ny fampahalalana momba ny handefasana vola gram
Dr. Patrick Young08 / 01 / 2018 amin'ny 9: 56 pm
OK, hifandray aminay ianao
Robert Buchel08 / 01 / 2018 amin'ny 2: 13 pm
Salama e. Ohatrinona ny vidin'ny 100 amin'ny Testosterone Enanthate? Ary firy ny saram-pandefasana entana any Holandy?
Dr. Patrick Young07 / 10 / 2018 amin'ny 8: 50 pm
OK, hifandray amin'ny mailakao aho.
Haitham A07 / 10 / 2018 amin'ny 12: 53 pm
Inona no mety ho vidin'ny fividianana gramin'i 25 amin'ny Test Enanthate, izay natolotra tany Ontario, Kanada
Edward Corlett06 / 24 / 2018 amin'ny 5: 55 pm
Afaka mahazo izany any Canada aho
Homer simpson04 / 05 / 2018 amin'ny 8: 14 pm
Hey mila test e aho e. Afaka manao izany ve ianao any Washington?
Ny Torolàlana Faritan'ny Propionatera Propionate avy amin'ny	Loharano voajanahary Orlistat ho an'ny fahavoazan'ny lanjany-Zava-mahadomelina matavy be no tokony ho fantatrao !!!
Copyright © 2019 aasraw Zo rehetra voatokana. Designed by www.cofttek.com www.buyaas.com www.apicmo.com www.wisepowder.com www.phcoker.com